Baraha Bulshada: Sahanka Caalamiga ee SAP (Qeybta II) | Martech Zone
Sheekada ka dambeysa sida aan ugu daneystay baraha bulshada ayaa aheyd mid si faahfaahsan u faahfaahsan - isku darka meesha aan ka shaqeeyay, waxa aan u qabtay nolol iyo dadka nolosha saameynta ku leh. Aad u adag, dhab ahaantii, waxaan ku qoray qoraal dhan Sideen ugu xiisay baraha bulshada. Shel wuxuu gudbiyay su'aalo dheeri ah oo muhiimad gaar ah leh, sidaa darteed waxaan rabaa inaan ka jawaabo kuwa ku jira dabagalkan.
2. Maxay yihiin qalabka warbaahinta bulshada aad isticmaasho?
Asal ahaan, waan isticmaalaa WordPress, Del.icio.us, Linkedin, Plaxo, iyo Jaiku. Aniguba waan isticmaalaa Facebook, MySpace, Ryze, Twitter iyo Pownce. Gobol ahaan, sidoo kale waan isticmaalaa IndyMojo iyo, dabcan, MyColts.net.
3. Sidee ayey baraha bulshada u beddeleen meheraddaada iyo / ama noloshaada?
Waxaan u arkaa qormooyin dhowr ah oo ku saabsan sida ay tahay Baraha Bulshadu lumid waqtigeenna. Qodobadani aad ayey ugu yar yihiin aragtidooda isku xirnaanta iyo intee in le'eg ayey noo suurta gelinaysaa inaan wax soo saar badan yeelanno. Ganacsi ahaan asal ahaan waxaa lagu sameeyaa cilaaqaadyo allows Warbaahinta bulshada ayaa noo oggolaaneysa inaan kula xirirno dadka si ka fudud sidii aan waligeen u soo marin.
Maanta waxaan shirkaddayda uga raadinayay adeeg fakis ah oo aad uga jaban. Waan raadiyay Del.icio.us waana la helay JBlast. Marka xigta, waxaan raadinayaa kheyraad goboleed oo loogu talagalay daadinta khadadka taleefanka ee xafiiskayaga cusub - waxaan ku dhajin doonaa su'aal ahaan LinkedIn. Beddelka ayaa ah in waqti la qaato oo la raadsado shabakadda, oo la waco ganacsiyada maxalliga ah, iwm. Waqti badan ayaan lumineynaa iyada oo aan la helin isku xirnaanta saxda ah! Xusuusnow maalmihii aannaan wax ka raadin karin internetka? Waan sameeyaa! Waxay ahayd mid xanuun badan.
Noloshayda, waxay ku yeelatay saameyn aan caadi ahayn. Waxaan ka helay shaqadaydii ugu dambaysay adoo adeegsanaya balooggayga iyo isku xidhka xirfadlayaasha maxalliga ah ee Warbaahinta Bulshada, waxaan ku hadlaa shirarka gobolka ee mowduuca waxaanan isku dayayaa inaan naftayda ka faquuqo shaqada muddo dheer igu filan si aan runtii uga caawiyo qaar aan faa'iido doon ahayn gobollada.
4. Wax iiga sheeg baraha bulshada iyo Indianapolis Colts. Dhab ahaantii miyaad dareentaa in warbaahinta bulshada ay ka caawin doonto inay ku guuleystaan ​​Superbowl?
Koofiyadaha Indianapolis ayaa noqon doona kuwa ugu horeeya ee sidaas kuu sheegaya Ninka Laba iyo Tobnaad wuxuu ka caawiyaa inuu guuleysto ciyaar kasta. Ninka laba iyo tobnaad waxaa loola jeedaa taageere, qofka ka baxsan garoonka ee saameynta ugu weyn ku leh ciyaarta. Waxaan tagay RCA Dome oo waxaan arkay dhowr ciyaarood waana wax aan caadi aheyn buuqa iyo tamarta taageere u keeno ciyaarta! Ka fikir noloshaada daqiiqad oo xusuusnow waqti uu qof kugu aaminay. Waxay ku siinaysaa rabitaan ah inaad guuleysato, miyaanay ahayn? Hadda qiyaasi gobol dhan oo ku taageeraya! Ka waran taageerayaashaas kuwa ka baxsan gobolka maxalliga ah?
Colts waxay leeyihiin in ka badan hal milyan oo qof oo booqda boggooda. Intooda badani xitaa kuma noola halkan Indianapolis! Xitaa waxay leeyihiin taageerayaal dibedda ah oo la socda ciyaar kasta oo ka qayb gala boggooda aan joogsi lahayn. Su’aashu waxay bilaabatay in la isweydiiyo, sidee kooxdu ugu xirmi kartaa taageere waliba sifiican sideese taageerayaashaas ay sifiican iskugula xiriiri karaan Shabakad Bulsho ayaa jawaab u ahayd. Tababaraha Dungy hadda waa hubkaa! Bal qiyaas… tababare NFL ah oo xiriir toos ah la leh taageerayaasha koox.
Sida koox kasta oo isboorti oo xirfad leh, Colts waxay ogaadaan in xilliyada waaweyn ay yimaadaan oo socdaan. Nasiib darrose, taageerayaasha qaar ayaa la yimaada oo la taga xilliyadaas. Colts waa ganacsi iyo sidoo kale koox waxayna u baahan yihiin inay qabtaan shaqo weyn si ay u hubiyaan inay u muujiyaan taageerayaasha qadarin. Ganacsiyada kale, tan waxaa loo yaqaan Daacad u ahaanta Macaamiisha. Colts waxay rabaan inay ku xirnaadaan taageerayaashooda si marka waqtigu kacsan yahay taageerayaashu ay wali halkaas joogaan. Waad ku mahadsan tahay dhammaan shaqooyinka ururku qabanayo, way noqon doonaan!
5. Wax iiga sheeg baraha bulshada ee warshadaha cuntada iyo makhaayadaha. Immisa ayaa la isticmaalaa? Sidee uga wanaagsan in loo isticmaalo?
Warshadaha Cuntada iyo Makhaayadaha waa warshad leh xuduudaha ugu adag ee aad qiyaasi karto. Halka, dal ahaan, aan sii wadno cunista inta badan, maqaayadaha ayaa loo dhisayaa bidix iyo midig… markii dambena ganacsiga ayay ka baxayaan. Qof kasta oo shirkad joogto ah la ah shirkad marwalba wuu ku qanacsan yahay markaad albaabka ka soo baxdo oo qof ku yiraahdo, “Hi Doug!”. Online, tani ma aha wax ka duwan. Makhaayadaha leh joogitaan xoog leh oo khadka tooska ah ah waxay arkayaan 20% illaa 30% kobaca qaadista iyo bixinta. Miyaanay fiicnayn haddii ay xusuustaan ​​amarkii kuugu dambeeyay ama saxanka aad ugu jeceshahay ama xasaasiyadda aad ku leedahay lawska?
Weligaa miyaad isweydiisay cidda ay tahay taas adiga kuu karinaysa cuntadaas? Waan hubaa inaan sameeyo! Maxaad ugu maleyneysaa kuugga maqaayadaha qaaliga ah inay sidaa u muuqdaan? Waa xiriirka bulshada ee mas'uulka ka ah arrimaha, marwalba maahan cuntada. Cunitaanku waa kaqeybgal bulsho, maahan waxqabad jireed - maqaayadaha waa lawaayaa markay gaarayaan macaamiishooda internetka. Nasiib darrose, darisyadiisa aawadeed dad badan ayaan rabin inay galaan meheraddan. Waxaan u maleynayaa in dadka wax sameeya, in kastoo, ay leeyihiin wax soo saar dhab ah oo, haddii la isticmaalo, ay guran doonaan faa'iidooyinka!
Waxaan halkaas ka gaari doonnaa B2C dhinaca ganacsiga. Cunto jecelyaasha ayaa durbaba sameynaya qaybtooda. Baadhid Dhammaan cuntooyinka, shabakad bulsheed loogu talagalay dadka maalin kasta. Dadkuna waxay soo dhejiyeen oo waydiiyeen sababta aysan u jirin Makhaayada isku xidhka bulshada halkaas.
6. Waxaad moodaa inaad noqotay codkii Qalbidhagax ee baraha bulshada. Ma ii sheegi kartaa sida dadka iyo ganacsatadu u adeegsanayaan guud ahaan? Qalab noocee ah ayey adeegsanayaan?
Qalbidhagax waa meel layaableh oo ay ku nool yihiin dad weeyn, dadaal badan. Tikniyoolajiyadda marwalba waxaa loo arkaa inay tahay qalab laakiin had iyo jeer xalka halkan laguma arko. Shirkadaha horumarinta ee halkan ku yaal Indianapolis waxay dhisaan qalab fara badan… kuwa horumariya waxay dhisaan codsiyo adag oo laf dhabar u ah dhowr warshado. Meesha dooxada silikoonku had iyo jeer raadiso 'fikradda xigta', dadka halkan jooga waxay ka walaacsan yihiin sidii ganacsiyada jira u shaqeyn lahaayeen.
Sidaas darteed, Baraha Bulshadu wali waa bilow. Dadka waaweyni waxay u muuqdaan inay qalabkan u eegaan inay ku ciyaaraan. Waxaan leeyahay saaxiibo aan wali yeelan doonin IM aniga maxaa yeelay taasi waa nooca ay caruurtoodu sameeyaan. Warshadeheenna madaniga iyo ganacsiga ayaa aad uga dambeeya tiknoolajiyad kasta, inkasta oo ay tahay Warbaahinta Bulshada. Jaamacadaheena ayaa ah kuwa ugufiican dalka laakiin waxaan luminay ardaydeena ka qalin jabisay gobolada kale maxaa yeelay ganacsigeena indhaha uma furi doono waxyaabaha sida Warbaahinta Bulshada oo ah xalka ganacsi ee jira.
Waan beddeli doonaa, oo waxaa jira qaar ka mid ah dadka halkan jooga ee bulshada ka mid ah oo wadi doona isbeddelkaas. Ma hubo inaan ahay ka codka, laakiin waan hubaa inaan sii wadi doono isku dayga. Ma jirto sabab aynaan ula tartami karin Seattle iyo San Jose iyada oo la siinayo iskuullo aad u wanaagsan iyo qiimaha noloshu ku badan tahay ee aan halkan ku haysano!
7. Aan ka wada hadalno ganacsiga guud ahaan. Ganacsiyada ma yar yihiin ama weyn yihiin, iyagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada ee Midwest? Ilaa heerkee?
Waxaa laga yaabaa sawirka ugu wanaagsan ee adeegsiga tikniyoolajiyadda inuu yahay saaxiib Roger Williams oo la socda Machadka Hoggaanka Degdegga ah halkan Indianapolis. Roger wuxuu isku aasay Facebook si uu ula xiriiro dhalinyarada gobolka.
Machadka Hogaaminta Degdega ah (ELI) wuxuu kaqeebqaataa dhalinyarada deegaanka Indianapolis inay noqdaan daneeyeyaasha bulshadayada iyada oo loo marayo barnaamijyada Help Indy Online (HIO) iyo Barnaamijyada Helitaanka Bulshada (CAP). Waxaan eVites ka helaa Roger toddobaad kasta… waa inuu ordaa boqol mayl saacaddii. Waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka caawiyo mustaqbalka.
Pat iyo aniga ayaa sidoo kale bilaabay Waxaan Doortaa Indy!, Goob ay muwaadiniinta iyo hoggaamiyeyaasha gobolku ku qori karaan, ereyadooda, sababta ay u jecel yihiin bartamaha Indiana. Gaaritaanka goobta ayaa furan oo waligeed laguma xadgudbin. Sheekooyinka waa kuwo cajiib ah - runtiina waxay tilmaamayaan waxa cajiibka ah ee ku saabsan Indy. Waxaan jeclaan lahayn inaan waqti badan ku qaadanno goobta - laakiin waa hagaag in la arko dadyowga si aan kala sooc lahayn u dhajiya waqti ka waqti. Waa Indiana!
Marka laga soo tago Indianapolis Colts, wargeyska gobolka wuxuu bilaabayaa inuu arko qiimaha ay ku leedahay baraha bulshada sidoo kale. Baadhid IndyMoms, Waa goob aad u wanaagsan oo wargeysyada gobolku ay ku shaqeeyaan kuna kobcaan waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaasha. Waxaan jeclaan lahaa in qaar ka mid ah warbaahinta kale ay qabtaan! Waxaan halkan ku helnay wargeys weyn oo beddel ah oo halkan ku yaal iyo dhowr goobo ganacsi oo cajiib ah (baahin iyo daabac). Waxaan aaminsanahay inay si weyn kor ugu qaadi karaan dhexgalkooda iyagoo adeegsanaya Baraha Bulshada.
FIIRO GAAR AH: Waxaan isku dayi doonaa inaan dabagal ku sameeyo su'aalaha ugu dambeeya habeen dambe!
Tags: sahan caalami ahdheecaansap global sap
Agoosto 21, 2007 saacaddu markay ahayd 1:13 PM
Ninka 12-aad waa buuqa dadka badan ay ku ridayaan kuwa ku hadla.
Agoosto 21, 2007 saacaddu markay ahayd 2:48 PM
Wuxuu leeyahay taageere Steeler ah… idinku raggu waad qurux badnaayeen dhowr xilli ka hor markii aad ku soo dhex dhuunteen RCA Dome ee ciyaarta isreebreebka!